Marketing Manager Archives - Page2of3- Glory Assumption Space
Marketing Manager – Female (5)Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Event Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Marketing Manager – Female (5)Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Marketing နှင့်ပတ်သက်သည့် Diploma (or) MBA ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - English စာ ရေး၊ဖတ်၊ပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ - Computer နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ - Management ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရမည်။ - ရုံးချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိ (Monday to Friday ) - စနေနေ့တ၀က် ညနေ ၃ နာရ်ီအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Marketing Manager – Male (5)Posts /လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Concrete Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Marketing Manager – Male (5)Posts /လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သာကေတမြို့ နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Concrete လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ သာကေတ၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့ နယ်နှင့်နီးသူများ ဦးစားပေး မည်။
Marketing Executive – Male/Female (5)Post /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Concrete Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။
Marketing Executive – Male/Female (5)Post /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သာတေမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Concrete လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - သာကေတ၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့ နယ်နှင့်နီးသူများဦးစားပေး မည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Marketing Manager – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Event Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။စနေနေ့တ၀တ် နှင့် တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ 1. Marketing Manager – Female (5)Posts /လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Marketing နှင့်ပတ်သက်သည့် Diploma (or)MBA တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - English စာရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Computer (Word,Excel,Internet & Email )အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၄)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - Team တစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Marketing Manager – Male (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ Marketing Manager – Male (5) Posts /လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာမြို့ နယ်။ - ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ MBA (or) Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - Computer နှင့် အင်တာနက်အီးမေးလ်အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။ - အင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် သွားနိုင်ရမည်။ - Marketing Plan ဆွဲနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Marketing Manager–Male/Female(5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။
Marketing Manager–Male/Female(5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
အသက် (၂၅ မှ ၃၅ ) )၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
Marketing ပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်ရှိရမည်။
Forklift ပိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။
Marketing Manager – Male/Female –5Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / ဒေါပုံမြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါပုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Distribution ကုမ္ပဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ 1. Marketing Manager – Male/Female –5Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / ဒေါပုံမြို့နယ် • Any graduate and more preferable is Sales and Marketing Management Diploma or MBA. • Local Nationality only. • Age between ( 30 ~ 45 ) years • Over5years as Sales and Marketing Manager level in FMCG field. • Strong analytical, problem solving, organizational skills. • Well knowledge of MS Office (Excel, Word & Power Point...) မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09 262223783 ,09-262223784 , 09 977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင် အင်းစိန်လမ်းမကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Marketing Manager - M /F (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀/- ကျပ်/စမ်းချောင်းမြို့နယ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Marketing Manager - M /F (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀/- ကျပ်/စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ ဘွဲ့ရ( သို့ ) MBA ဘွဲ့ရှိရမည်။ Sales and Marketing နှင့် ပက်သတ်သော Diploma ရရှိရမည်။ Sales and Marketing နယ်ပယ်တွင် လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၇)နှစ်ရှိရမည်။ Communication Skill ကောင်းမွန်၍ English (4) Skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ အသက် (၃၅)နှစ်မှ (၄၅)နှစ် အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။လုပ်ငန်းခွင်မှ ဖိအားများဧ။် ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်၊ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ [caption id="attachment_347" align="alignnone" width="900"] Online Marketing Key Can Be Blogs Websites Social Media Or Email Lists[/caption]
Salary Rang : Above 600000
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါပုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Distribution ကုမ္ပဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ 1.	Marketing Manager – Male/Female –5Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / ဒေါပုံမြို့နယ် •	Any graduate and more preferable is Sales and Marketing Management Diploma or MBA. •	Local Nationality only. •	Age between ( 30 ~ 45 ) years •	Over5years as Sales and Marketing Manager level in FMCG field. •	Strong analytical, problem solving, organizational skills. •	Well knowledge of MS Office (Excel, Word & Power Point...) မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09 262223783 ,09-262223784 , 09 977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင် အင်းစိန်လမ်းမကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Marketing Manager – Male / Female –5Posts / Salary – 500000 Above Kyats / Pazuntaung Township
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Shipping & Logistics ကုမ္ပဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ Marketing Manager – Male / Female –5Posts / Salary – 500000 Above Kyats / Pazuntaung Township . •	Any Graduate ,3to5years experiences in Shipping & Forwarding & Logistic. •	Can Speak & Write in English well. •	Excel can use properly. •	Will have any Certificate in Shipping & Forwarding & Logistic. •	Good personally & Good dealing with our customers & other persons. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09 262223783 ,09-262223784 , 09 977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင် အင်းစိန်လမ်းမကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Marketing Manager – Female (5) Posts/Salary-500,000 Kyats(above)/Tharkayta Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - English (4) Skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Foreigner နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - Marketing ပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၄) နှစ်ရှိရမည်။
Marketing Manager – M/F (5)Posts
############# Urgent Requirement ############## မင်္ဂလာပါရှင့် ။ ဒဂုံမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Marketing Manager – M/F (5)Posts/Salary – 700,000 Kyats/Dagon Township - MBA ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ - Sales & Marketing နှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၇)နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Personality & Communication Skill ကောင်းမွန်၍ English (4) Skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Marketing Plan များကို ကောင်းစွာရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ - မိမိအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရသော Team ကိုတိုးတက်အောင် ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းခွင်မှ ဖိအားများ၏ဒဏ်ကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Marketing Manager- Male/Female (5) Posts
Salary Rang : 20000000
1. Marketing Manager – Male/ Female (5)Posts /Salary -20,000,000 Kyats(above) / Mayangone Township - ဘွဲ့ရ - English Flute - FMCG Background နှင့် Exp (5) နှစ် Manager Level နှင့် Exp 10 +++ ရှိရမည်။ - Age 30-45 - Chinese Language ပြောနိုင်လျှင်ပိုကောင်းသည်။
Marketing Manager-Male/Female (5) Posts
Marketing Manager- Male/Female (5) Posts/Salary-500,000 Kyats/Hlaing Township. - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၄၀ နှင့် ၄၅ အတွင်း - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ့ (၆) နှစ်ရှိရမည်။ - Management ပိုင်းကို လုပ်နိုင်ရမည်။
Marketing Manager- Male/Female- (5)posts / Salary – 500000 (Above) Kyats
မင်္ဂလာပါ ။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Marketing Manager- Male/Female- (5)posts / Salary – 500000 (Above) Kyats /Bahan Township -	Sales & Marketing ပိုင်း Certificate ရရှိထားသူ -	ဘွဲ့ရ(Business ပိုင်း Degree ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။) -	NGO အတွေ့အကြုံ (OR) -	NGO နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အတွေ့ အကြုံ (3-5) years -	Project Management Skills ရှိရမည်။ -	Age (27- 35 ) years မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone	No.-09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။